အီရတ်ဝန်ကြီးချုပ်အား လုပ်ကြံရန် ကြိုးပမ်းမှုကို ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ် ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချ - Xinhua News Agency
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်အား ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန် ၂၄ ရက်က အီးယူထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်မီ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရက်စ်ဆဲလ်မြို့၌ မိန့်ခွန်းပြောကြားနေသည်ကိုတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကုလသမဂ္ဂ ၊ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်က အီရတ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မူစတာဖာအယ်လ်ခါဒီမီ(Mustafa al-Kadhimi) အား နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်က လုပ်ကြံရန်ကြိုးပမ်းမှုကို ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲ၏ထုတ်ပြန်ချက်ကို ၎င်း၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Stephane Dujarric က ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးခဲ့ပြီး ယင်းပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူများအား တာဝန်ခံမှုရှိရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ထို့ပြင် အီရတ်ပြည်သူများအနေဖြင့် အီရတ်နိုင်ငံမတည်မငြိမ်ဖြစ်ရန် ကြိုးပမ်းမှုများ နှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို လက်မခံကြရန် နှင့် အတည်ငြိမ်ဆုံးရှိကြရန် တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဂူတာရက်စ်က “ နိုင်ငံရေးထဲမှာ ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသူတွေ အားလုံးအနေနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာကြဖို့ ၊ မတူကွဲပြားမှုတွေကို ငြိမ်းချမ်းစွာ အဖြေရှာကြဖို့နဲ့ အားလုံးပါဝင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ် ” ဟု ကြေညာချက်တွင် ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားသည်။
အီရတ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် အယ်လ်ခါဒီမီသည် နိုဝင်ဘာ ၇ ရက် နံနက်အစောပိုင်းတွင် ဘဂ္ဂဒတ်မြို့၏ လုံခြုံရေးထူထပ်စွာချထားသော ဂရင်းဇုန်းအတွင်းရှိ သူ၏ နေအိမ်အား ဒရုန်း(မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ငယ်)ဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုတွင် အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဒရုန်းဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ပေါက်ကွဲမှုအတွင်း ဝန်ကြီးချုပ်အိမ်တော်အဆောက်အဦထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ကြောင်း နှင့် ဝန်ကြီးချုပ်၏ လုံခြုံရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားလည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားခဲ့ကြောင်း သတင်းများက ဆိုသည်။
အီရတ်ဝန်ကြီးချုပ် အယ်လ်ခါမီဒီသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေလတွင် ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆို၍ စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
UN chief strongly condemns assassination attempt against Iraqi PM
UNITED NATIONS, Nov.7(Xinhua) — United Nations Secretary-General Antonio Guterres strongly condemned the assassination attempt against Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi on Sunday.
Throughastatement attributable to his spokesperson Stephane Dujarric, the UN chief called for the perpetrators of this crime to be held accountable, and urged Iraqis to exercise utmost restraint and reject violence and attempts to destabilize Iraq.
The secretary-general “urges all political actors to uphold the constitutional order and resolve differences through peaceful and inclusive dialogue,” the statement added.
Al-Kadhimi escaped an attempt on his life after an explosive-laden drone struck his residence in Baghdad’s heavily-fortified Green Zone earlier in the day.
According to reports, the exploding drone caused damage to the residence and several of the prime minister’s security guards were injured in the attack.
Al-Kadhimi was sworn into office in May last year. Enditem
Photo- United Nations (UN) Secretary-General Antonio Guterres deliversaspeech before the EU summit in Brussels, Belgium, on June 24, 2021.
Related Topics:condemnsIraqi PMUNXinhuamyanmarကုလအကြီးအကဲအီရတ်ဝန်ကြီးချုပ်
တရုတ်နိုင်ငံ Shenzhou-13 အာကာသယာဉ်မှူးများက ပထမဆုံးအာကာသယာဉ်ပြင်ပ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ပြည့်စုံစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့